Medjugorje: "chekwaa okpukpu abụọ maka okpueze nke asaa Pater, Ave na Gloria" | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Jenụwarị 2, 2021
Oriana kwuru, sị:
Ruo ọnwa abụọ gara aga, m bi na Rome na-ekerịta ụlọ na Narcisa. Anyị abụọ họọrọ ịbụ ndị na-eme ihe nkiri; mgbe ahụ Rome, mgbe ahụ nyocha, mgbe ahụ, nhọpụta, oku ekwentị na oge ụfọdụ ụfọdụ ọrụ, nnukwu ọchịchọ "ime ya" kamakwa ọtụtụ iwe na iwe megide ndị "nwere ike" inye gị aka, mana echeghị banyere onye ọ bụla , ma ọ bụ njọ, na ọtụtụ ihe dị mwute karị ugboro ugboro, ọ na-enye gị ohere ịrụ ọrụ "ndammana" na cabio nke ihe ọzọ, ọ bụ n'ekpere ka ezipụta ihe. N’etiti ọgba aghara a niile biri afọ 4, kedụ oyi, ọtụtụ sandwiche ndị fọdụụrụ n’afọ, kedu kilomita ole na ole na-adịghị, ole mmechuihu!
Eprel 87: Mụ na Narcisa gara n’ụlọ isoro ndị ezinụlọ ha nọrọ ụbọchị ole na ole, o si n’obodo dị n’obodo Alessandria, esi m na Genoa.
Otu ụbọchị, Narcisa gwara m: ““ ma? M na-apụ, m na-aga Yugoslavia ”. Echere m maka njem izu ike, azịza m: "I mee nke ọma, gọzie gị!" "Ma ọ dịghị! Ma ọ dịghị! - ọ na - eji mmụọ obi ụtọ -, never nụtụbeghị Medjugorje? "
Na m: "??? Kedu ihe ??? "" ... Medjugorje ... ebe Nwanyị nwanyị anyị pụtara! Anna, enyi m si Milan chọrọ chọrọ ịkpọga m Medjugorje, yabụ m kpebiri ịga, njikere, ị nwere ike ịnụ m? " Na m: "hear ịnụ gị, ana m anụ gị, naanị na ị na-eyi mpụ ka ị na-enye ọnụọgụ karịa karịa ka ọ dị na mbụ".
Mgbe otu izu gasịrị, nne ya were ezigbo iwe, ọ gwara m n’ekwentị:
“Nwanyị ahụ ka nọ ebe ahụ, Angelo alaghachila (nwa nwoke nke Narcisa), Anna kwa, ọ nọrọ ebe ahụ, ọ bụ onye ara! Ọ bụ onye nzuzu! " Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, ahụrụ m onwe m ka m na-achị ọchị ọchị, na echiche nkịtị na Narcisa ka nọ ebe ahụ, ara na-ama onye maara mmadụ ole ndị ọzọ na-ekwu na Madonna nọ…
Eprel 26: ụbọchị ikpeazụ nke ịnọ na ime obodo. Na ụbọchị ole na ole, m ga-alaghachi Rome na m ga-esi n'ụgbọ okporo ígwè gaa Genoa. Anọ m na Tortona, ọdụ ọdụ etiti, enwere mita ole na ole ruo mbata ụgbọ oloko na Genoa, ebe ikpo okwu jupụtara; onye ka m na-ahu? Narcisa! Ọ dị ka ọ ka si n'apịtị pụta: ọ nọ n'ọnọdụ ọgba aghara zuru oke. Ọ ji obi ụtọ kwuo, sị: “Aghaghị m ịgwa gị okwu, kpọọ m ozugbo ị batara. Ugbu a ị nwere ụgbọ oloko ma enweghị oge, mana kwere m nkwa otu ihe. Kwe m nkwa na ị ga-eme ihe m, gwa m na ị ga-eme ya! Aghọtaghị m ihe ọ bụla ọzọ, nwanyị nke na-ekwughachi "Kwe m nkwa na ị ga-eme", ndị na-ele anyị anya ma na-eche na anyị gbapụrụ n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ, ihere na-eme m. Ọ na-aga n'ihu, na-enweghị nchekasị na echefughị ​​ihe ọchị nke ndị gbara anyị gburugburu.
Bee, oke ehi a na-eti mkpu n'ikpeazụ, sị: "Ọ dị mma, ana m ekwe gị nkwa na m ga-eme ihe a !!!", Ọ ofụ nke anya n'anya Narcisa, onye na-agba chaplet n'aka m (... "Bịanụ, ebe a n'ihu n'ime ndị a niile, lee ụdị! ị ghọrọ onye nzuzu? ") wee gwa m:" Okpukpe; 7 Nna-ayi; 7 Ekele dịrị Meri; 7 Otuto kwa ubochi maka otu ọnwa ”.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na m na-atụ uche, M stammer: "Gịnị ????", ma ọ na-atụghị egwu na afọ ojuju: "I kwere ya nkwa". Ife ụgbọ oloko ahụ kewara anyị, ọ dị m ka m si na mkpali pụta. Narcisa na-eji obere aka ya ma na-eti mkpu:
"Ml ga-agwa!"; Ekelere m onwe m, ndị na-eso m abịa na-ele m anya ma na-achị ọchị. Oh m ihe ogugu!
Ekwere m ya nkwa, naanị m ga-emezu nkwa ahụ, ọbụlagodi na ọ ga-adọka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ike, mgbe ahụ Narcisa kwuru na Nwanyị Nwanyị anyị n'ime ọnwa a ga-enye ekele pụrụ iche nye ndị na-ekpegara ya ekpere.
… Passbọchị gafere, na nhọpụta m kwa ụbọchị na-aga n'ihu n'echezọghị, n'ezie, n'ụzọ dị ịtụnanya ọ ga-abụ “ihe” ahụ m chere na achọrọ m iji ịdị ngwa na nhazigharị karịa. Anaghị m ajụ, anaghị m ajụ maka onwe m, naanị m na-ekpe ekpere m wee kwụsị.
Mụ na Narcisa laghachi Rome, ndụ na-egbukwa anyị ọzọ. Keep na-agwa m maka Medjugorje, na e nwere ọtụtụ ekpere na ị naghị agba mgba! " na n'ebe ahụ ha niile dị mma, nwee nghọta ma hụrịta onwe ha n'anya! "
Gobọchị na-aga ma ugbu a amatala m ọtụtụ ihe gbasara Medjugorje, anụla m ihe ndị m na-amaghị na ha nwere ike ime, mana karịa Narcisa niile, m na-ebi ngbanwe ya na-awụ akpata oyi n'ahụ, ọ bụ "iju", ọ na-aga Mass , na-ekpe ekpere, na-ekwu rosary ma na-adọkpụkarị na chọọchị ụfọdụ. Narcisa na-apụ, pụọ na Rome maka ụbọchị 4-5 ma hapụrụ m naanị n'ụlọ m na-ahụghị n'anya, na-echegbu onwe m na-enweghị isi nke ọrụ, nke ịhụnanya .., nhụjuanya kachasị njọ dakwasị m, nkụda mmụọ anaghị emetụ : n'abalị anaghịzi ehi ụra, m na-ebe ákwá. Bọchị anọ nke ịtọgbọrọ n'efu: na nke mbụ, n'ezie oge mbụ na ndụ m, achọpụtara m onwe m na-echesi echiche ike banyere igbu onwe m.
M na-ekwu mgbe niile na m hụrụ ndụ n'anya nke ukwuu, na enwere m ọtụtụ ndị enyi hụrụ m n'anya na ndị m hụrụ n'anya, nne na nna "na-asọpụrụ" nwa ha nwanyị naanị, Achọrọ m ịpụ n'anya, pụọ n'ihe niile na onye ọ bụla .. .Ma dika anya mmiri na-arutu na ihu m juru oyi, a na m echetaghị na ekpere m na-ekpe kwa ụbọchị n'ime ọnwa niile, ana m eti mkpu: nyere m aka! Enyemaka! Nyere m aka! Biko!". N'echi Narcisa na-alọta: Ana m anwa zoo n'ụzọ ụfọdụ mmechuihu nke dị n'ime m, na-akparịta ụka ọ na-agwa m: "Ma ị maara na ebe a dị nso na Rome enwere ebe a na-akpọ S. Vittorino?".
N'ehihie echi ya, June 25, m nọ na S. Vittorino. N'ebe ahụ onye ọzọ gwara anyị na e nwere Fada Gino, onye ikekwe nwere ihere na onye "na-arịọ arịrịọ" kwa oge maka ọgwụgwọ. Onye toro toro ogologo na-eme m obi ụtọ nke Nna Gino. N’elu elu, ọ nweghị ihe mere, ma n’ime awa abụọ ahụ, enwere m echiche na “ihe” amalitela ịgbawa, gbajie ma “mepee” n’ime m.
Anyị na-ahapụ na ebumnuche siri ike ịlaghachi ozugbo enwere ike. Mgbe ihe dị ka ụbọchị iri gasịrị, na July 9, na 8 nke ụtụtụ, anyị gafere nke ugboro abụọ, dị jụụ ma juputa na "ochicho maka ihe", ọnụ ụzọ ámá nke Lady anyị nke Fatima.
N'oge a, echere m na ọ bụ ihe ziri ezi ma dịkwa mkpa ikwu ihe ole na ole gbasara m: ekwuputabeghị m maka afọ 15 na n'ime afọ 15 a etinyela m onwe m n'ụdị njem na ndọpụ uche ọ bụla, nke mere na 19 zutere m ọgwụ ọjọọ na ụlọ ọrụ nzuzu; na 20 (dika o siri ike ikwu) ite ime; na 21 m gbapụrụ n'ụlọ wee lụọ (na nkịtị) na "otu" onye ruo afọ abụọ na-eti m ihe, na-emegbu m n'ụzọ niile kwere omume na iche n'echiche; na 23, n’ikpeazụ mkpebi ịhapụ na ịlaghachi ụlọ na, mgbe ọnwa anọ nke ụjọ ụjọ, nkewa iwu. A manyere m ịgbapụ na Genoa n'ihi egwu di m oge niile. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọzọ
Echere m na ọ dị mkpa ikpughere ụdị "ahụmịhe" na "ihe arụ" nke m bugoro n'ime ya ruo ụbọchị ahụ mara mma nke Tọzdee 9 July, ụbọchị amụrụ m nke abụọ. N'agbanyeghị ihe ọjọọ m mere Onye-nwe na nne m nke bi n’eluigwe, Ha hụrụ m n’anya nke ukwuu. Mgbe m chetara ya, aga m akwa ákwá.
N’ụtụtụ ụbọchị ahụ ‘m tụbara onwe m’ n’ime nkwupụta ahụ, echere m na m nọrọ ebe ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ, juputara na ọsụsọ na amaghị m ebe m ga-amalite ma ọ bụ otu m ga-esi kwuo ya, mmehie m dị ọtụtụ ma sie ike! Mgbe m pụrụ, o siiri m ike ikwenye na Jizọs agbagharala m ihe niile, ọ bụghị n'ezie ihe niile, mana enwere m mmetụta n'ime m na ee, ọ dị, ọ dị ebube. N'ezie enwere m ogologo nchegharị m, echetụghị m: "Ọ karịrị akarị", n'ezie site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị ọ nwedịrịla obi ụtọ. N’ụbọchị ahụ, anatara m Oriri Nsọ mgbe ihe karịrị afọ 15 gachara.
Emechaa Nna Gino nyere anyi ngozi di iche na anya m wee hu ya. Ha alaghachila, kemgbe ahụ n'anyasị ahụ enwere m onwe m; nhụjuanya, ịda mba, nhụjuanya dị n'ime, obi nkoropụ na ọnọdụ ọjọọ m niile agakwaghị, kupụrụ.
N'ezie ọrụ ahụ aga n'ihu ma na-aga n'ihu na-enye m nsogbu, mana ugbu a ọ dị iche. Ọdịghị n ’ọdịnihu a na-ejighị n’aka, ụkọ ego na nkụda mmụọ ụfọdụ dakwasịrị m wee mee ka m nwee obi ọjọọ, ugbu a, n'agbanyeghị na m merighị lọtrị ọ bụla .., enwere m udo, dị jụụ, anaghị m ewe iwe na iwe ọzọ, ọ dị ka ọ bụrụ na n'ime na gburugburu enwere m ihe dị nro ma dị nro na-eme ka ihe niile dị nro, ahụ dị nro, nke ahụ na-eme m obi ụtọ. Ihe na-erughị ọnwa asatọ agafeela kemgbe 9 nke July 1987, ma o yiri m karịa. Ugbu a, m na-agba mbọ ibi ndụ ezi Ndị Kraịst, ana m ekwupụta kwa ọnwa, ana m aga Mas, ana m ewere udo na "M na-ekwu okwu" mgbe mgbe nye Jizọs na nne nke Eluigwe. Enwere m olileanya ma chọọ ịbawanye na ndụ karịa na okwukwe na mmụọ nsọ ml nyere aka melite ma too.
A na m echekarị oge ahụ, mgbe Narcisa kwuru "kwere nkwa ime ya" m wee sị "ee"; Echere m maka ihere a mere mụ na ya, n’ihu ndị mmadụ lere anyị anya n’ihu, tụgharịakwa n’uche otu m chọrọ taa “mkpu” ụwa “M HERE N’ANYA MAKA EGO!”.
N'ebe a, nke a bụ akụkọ m, echere m na ọ bụ akụkọ yiri nke ọtụtụ ndị ọzọ, yiri ya nke ọma!
Want chọrọ ịga Medjugorje ikele nne ahụ zọpụtara m; na-ekele gị n'ihi na m erughị eru ihe ọ bụla na kama m natara ihe niile; daalụ maka onyinye a, nke kachasị mma, nke m na-amadịghị dị!
Jesus na Eluigwe nke Medjugorje